အာဖရိက RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ရုရှားရထားလမ်း၏ပထမဆုံးဒုတိယအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးအလက်ဇန်းဒါး Misharin နှင့် Didier Mazengu Mukanzu၊ [ပို ... ]
တရုတ်ကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သော CRCC 3.9 သည်နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့်ဘီလီယံဘီလျံကျော်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည် Abuja Itakpe Lokoja မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန်အတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအကြီးဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Türkiye ile Etiyopya arasında demiryolları alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TİKA Başkan Vekili Serkan Kayalar, Etiyopya Demiryolları Kuruluşu (ERC) Ceo’su Dr.Sentayenhu Woldemichael Yohannes arasında “Demiryolu [ပို ... ]
ကွန်ဂို, အနည်းဆုံး 50 ဘဝမှာပြည်သူ့ပျောက်ဆုံးသွားသောခုနှစ်တွင်ရထား Crash
အဆိုပါလွဲသွားမတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နံနက်ယံ၌ရထားများဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တန်ဂန်ယိဒေသအနည်းဆုံး 50 လူတွေသေဆုံးကနဦးအစီရင်ခံချက်များအရသိရသည်ကွန်ဂို။ ရိုက်တာသတင်းဌာနကလူသားချင်းစာနာမှုရေးရာဝန်ကြီးကိုးကား [ပို ... ]
တန်ဇန်းနီးယား, Morogoro - T22 (L ကို = 2019) အခမ်းအနားနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမှတံခါးနားမှာစီမံကိန်းအရှည်ဆုံးဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအပေါ် Makutupor မီးရထားစီမံကိန်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်း, ဇူလိုင်လ21.031 နေ့စွဲ။ အခမ်းအနားတန်ဇန်းနီးယားအလုပ်သမား, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
DSM Masanjia ၏ TRC ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Kadogos နှင့် Korail စီမံကိန်း Manager ကို DSM ဂျုံ Hoon အတင်းအဓမ္မတန်ဇန်းနီးယား 06.07.2019 ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Isack အေ Kamwelw အတွက် SGR စီမံကိန်းကိုအပေါ် (Morogoro မှ Dar es Salaam) တန်ဇန်းနီးယား၏ယူနိုက်တက်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ဆက်လက် [ပို ... ]
မီးရထားကဏ္ဍအကြားပထမဦးဆုံးအတွက် ARUS, တူရကီနှင့်တောင်အာဖရိကအာဖရိကတိုက်ကြီး (ARUS) နှင့်စပျစ်သီးပြွတ်အပေါ်ရထားလမ်းစနစ်များသည်လယ်ပြင်၌လက်မှတ်Atıyorအာဖရိကရထား 2019 Anatolian မီးရထားစနစ်များ Cluster ၏အကြီးဆုံးပြပွဲဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
ပြည်သူ့ကွန်ဂို point-အဆိုးမြင်အန္တရာယ် Ngodj သမ္မတနိုင်ငံ 13 လူတွေအတွက်ဘူတာရုံနှစ်ခုကုန်တင်ရထား၏တိုက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံး, 25 လူတွေဒဏ်ရာရအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ကွန်ဂိုမီးရထားအထွေထွေမန်နေဂျာ (CFCO) Jean-Claude [ပို ... ]
တောင်အာဖရိကရထားလမ်းသုံးခုကသီးခြားယူနစ်ပါဝင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားနေသောခေါင်းစဉ်: Transnet ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးရထား (Transnet လီမိတက်), PRASA နှင့် Gautrain စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ။ ကျနော်တို့အသီးသီးဆန်းစစ်နေ: Gautrain Gautrain, ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်, က Pretoria နှင့် OR Tambo အင်တာနေရှင်နယ် [ပို ... ]
Kuzey Afrika’da yer alan Fas, zengin bir tarihe ve kültüre sahiptir. Fas’ın hem Atlantik Okyanusuna ve hem de Akdeniz’e kıyısı bulunmaktadır. Yüzölçümü 710.850 km2 olan Fas’ın nüfusunun önemli bir kısmı Atlas [ပို ... ]